Sideen ugu xiiseynayey Baraha Bulshada? | Martech Zone
Sabti, Agoosto 18, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii Shel weydiisatay dadka waaweeyn ee laga yaabo inay xiiseynayaan inay jawaab ka bixiyaan an Sahaminta SAP ee Warbaahinta Bulshada, Waan ka booday fursadda oo markiiba waan qoray. Oggolaanshaha Shel, wuxuu ii oggolaaday inaan ku dhajiyo jawaabahayga boggeyga. Tani waa Qaybta I!
Ii sheeg goorta iyo sida aad markii ugu horreysay u xiiseysey baraha bulshada. Sababta
Markii aan ka shaqeynayay Daabacaadda Warbaahinta muddo ka badan toban sano, waxaan daawaday sida Internetka uu si dhakhso leh u bilaabay inuu fiiro gaar ah u yeesho, isla markaana, uu xayeysiin uga sameeyo warshadaha wargeysyada. Internet-ka dhexdhexaadiye ahaan waa mid la heli karo, oo aan qaali ahayn, tikniyoolajiyaduna si fudud u fudud tahay. Xitaa gudaha warbaahinta daabacan, marwalba waxaan aaminsanahay in warbaahin kasta ay leedahay xoog iyo daciifnimo u gaar ah. Mararka qaar Wargeyska ma ahayn meesha ugu weyn ee lagu xayeysiiyo.
Markii internetka soo galay, asxaabtaydu waxay u arkeen hanjabaad. Waxaan u arkay fursad aan caadi ahayn. Waxaan ka booday markab waxaan u dhaqaaqay Denver, Colorado si aan uga shaqeeyo shirkad hormuud ka ah adeegsiga internetka. Nasiib darrose, waan ku biiray markii ay xumbadu qarxaysay. Waxaan u dhaqaaqay Indianapolis si aan ugu biiro joornaalka maxalliga ah una horseedo dadaalkooda suuq geynta tooska ah, anigoo ka faa'iideysanaya xogta si wanaagsan u bartilmaameedsada macaamiisha iyo riixista barnaamijka boostada tooska ah ee macaamiisha.
Waxaan isku dayay intii suurtagal ah inaan helo teknoolojiyada sida Suuqgeynta Emailka ee joornaalka sidoo kale, laakiin wax kasta oo "Internet" ah ayaa loo arkay inuu yahay mid dhexdhexaad ah oo wax ka gudbinaya isla markaana iibinaya xayeysiinta… ma abuuro xiriiro. Wax kasta oo internetka ah sidoo kale wuxuu hoostagaayey amarka waaxda IT-da sidaa darteed waxaan cagta mariyey suulasha dadyowga kale. Markii maamul cusubi soo galay oo bilaabay inuu weydiiyo, “maxaad samaynaysaa?”, Waan ogaa inay halmaameen oo aan u baahanahay inaan ka tago.
Iyada oo loo marayo saaxiibkay iyo saaxiibkay, Darrin Gray, waxaan la kulmay Pat Coyle oo waxaan ku biiray shirkadooda, Si toos ah. Darrin wuxuu caan ku ahaa iibinta iyo isku xirka shabakadaha. Pat wuxuu ahaa oo uu caan ku yahay dhismaha xiriirada. Waxaan ahaa nin xog iyo teknolojiyad - raadinaya teknolojiyaddii ugu fiicneyd si loo kordhiyo xiriirka shirkadaha ay la leeyihiin rajadooda iyo macaamiishooda. Waxay ahayd guul, Darrin waa la iibiyay, Pat ayaa hagayay, anigana waan dhisay!
Waxay ahayd inta lagu gudajiray muddadan aniga iyo Pat waxaan bilawnay inaan aragno saameynta ay kuleedahay baraha bulshada. Maahan wax aad u qosol badan, waxaan akhrinay (cunnay) Buugga Shel, Wadahadal qaawan. Waxaan fahannay in suuqgeyntu aysan ahayn uun tiknoolajiyad 'riix', waxay isu rogaysaa wax aad iyo aad u kala duwan.
Pat wuxuu u guuray Indianapolis Colts waqti buuxa. Colts, oo uu hogaaminayo Jim Irsay, wuu ogaa inay qarka u saaran yihiin weynaan waxaana aaminsanahay inuu leeyahay aragti ah inuu ogaado inuu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto fursada uu kula xiriiri karo taageerayaasha halka riixitaankiisa Superbowl uu yahay mid indhaha lagu hayo.
Waxaan u dhaqaaqay Xaqiiqda, Bixiyaha Adeegga Emailka, oo ay ku dheehan tahay wacdinta CMO iyo aasaasaha Chris Baggott. Fariinta Chris waxay ku saabsaneyd qiimaha cajiibka ah ee suuq geynta emaylka ee ku saleysan ogolaanshaha, oo ku wajahan fariinta saxda ah ee ku socota dadka saxda ah waqtiga saxda ah.
Labadii sano ee la soo dhaafay, aniga iyo Pat wali waxaan sii ahaannay saaxiibo dhow waxaanan inta badan la kulanay naadiga buugaagta ee maxalliga ah ee uu iskuduwaha ka yahay, The Indianapolis Book Mashup. Buuggeenii ugu horreeyay? Wadahadal qaawan Dabcan!
Pat wuxuu fursad u helay inuu ku riixo Colts inuu dhiso shabakad bulsheed oo loogu talagalay Superbowl Champions. Waxaan dhareystay markaan daawaday MyColts.net oo run noqonaysa. Jadwal mashquul ah oo aniga u gaar ah, oo aan u bilaabay Developer Community for ExactTarget isla markaana loo dallacsiiyay Maareeyaha Wax soo saarka ee ExactTarget intii aan ka soo kornay boqollaal macaamiil isku dhafan oo aan ka gaadhnay kumanaan, waxaan daawan karay uun sida MyColts.net loo bilaabay.
Chris Baggott iyo aniga waxaan kaloo bilownay la kulanka iyo ka hadalka arimaha dhexdhexaadka ah. Chris wuxuu fahamsan yahay qiimaha dhexdhexaadka, kaas oo (waxaan aaminsanahay) inuu ahaa mid saameyn badan ku yeeshay ku kicinta ExactTarget dhinaca hore ee warshadaha. Chris ' Email ku soo dir hababka ugu fiican waxaa la siiyay dhowr jeer sannadihii la soo dhaafay waxaana si xaqiiqo ah loogu aqoonsaday inuu yahay hoggaamiye feker ka ah warshadaha Suuqgeynta Emailka - qeyb ahaan boggiisa. Tani waxay ahayd markii Chris bilaabay inuu arko fursad, in kastoo. Blogs waxay ahaayeen gaadiid aad ufiican wixii macluumaad ah - laakiin wali uma sahlana macaamilka inuu helo nacnaca dahabka ah ee ay qorayaashu qorayaan.
Chris wuxuu bilaabay inuu ku beero abuur Barnaamijka Compendium, Bilaabistiisa cusub. Isha ku hay shirkadan! Waa isbeddelka soo socda ee barta wax lagu qoro haddana waxay noqotay run. Mararka qaarkood waxaan dareemaa sida aabbu u daawado ilmihiisa oo koraya maaddaama aan arko shirkaddan oo bilaabaneysa - laakiin, nasiib-darro, waqtigu ma joogin inaan ku biiro kooxda.
Maxay tahay sababta aan ugu qabsaday baraha bulshada?
Warbaahinta bulshada ayaa heerarka garoonka ciyaarta. Waxaan aaminsanahay inay muhiim u tahay ganacsiga sida ay muhiim ugu tahay dimuqraadiyadda. Warbaahinta bulshada ayaa siisa qof kasta oo leh kumbuyuutar iyo marin internet si uu cod ugu yeesho. Warbaahinta bulshada ayaa siisa dariiq wanaagsan, ganacsi daacad ah oo lagu dhiso xiriirro lala yeesho rajadooda iyo macaamiishooda. Mar dambe maahan 'kan awood u leh xayeysiinta ugu badan' ee guuleysta. Mar dambe ganacsatadu ma aha inay bixiyaan boqolkiiba boqol oo miisaaniyadooda ah si ay u daabacaan una baahiyaan warbaahinta loo helo. Haatan si fudud waa inay shaqo weyn qabtaan erayguna wuu soo bixi doonaa.
Suuqgee ayaan rabin inuu ku lug yeesho taas?
Xusuusin Dhinac ah: Sanado ka dib, Indianapolis Star waxay bilowday inay iftiinka sidoo kale aragto. Markii ay ku jeesjeesaan shaqaalaha tifaftirka, hadda waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu waxay noqonayaan aag hormarin u ah wargeyska. Baadhid IndyMoms tusaale weyn.
Tags: douglas karrsaxsandigaagga Indianapolissheekooyin qaawanShel Israelwarbaahinta bulshada
Agoosto 18, 2007 saacaddu markay ahayd 9:27 PM
Maqaal weyn, Doug. Waxaan ka imid adduunka daabacaadda sidoo kale. Waxaan ka jaray ilkaha aan ku barto qorista CompuWriter Jr. Waxyaabaha waxay lahaayeen xarig filim dheer oo leh font daabacan oo lagu miiqay gawaarida gudaha mashiinka. Markii warqad la qoro, dib ugama noqon kartid sixitaanka. Waxay ahayd inaad dib u qortid qadka oo aad gacanta ka sifeyso qaladka!
Waa la i afuufay markii tikniyoolajiyaddu timid oo geedi socodka farsamada oo dhan ka dhigtay “auto-magic”. Kumbuyuutar iyo madbacad, adduunka waxaa loo furay fursado aan dhammaad lahayn, oo ay ku jiraan hagaajinta nooca-o ka hor daabacaadda bogga (qiyaasi taas).
Kadib waxaa soo galay internetka dadkuna waxay bilaabeen inay isgaadhsiiyaan si aan hore loo arag. Waxaan si joogto ah ula yaabay qoto dheerida iyo ballaadhinta kartida iyo garaadka adduunka. Dabcan sidoo kale waxaa jira goobo adag, laakiin waxaan difaacayaa xuquuqdooda ku biirista wadahadalka. Waa wax lagu farxo in lagu noolaado xilli kacaan run ah.
Agoosto 18, 2007 saacaddu markay ahayd 9:51 PM
Aad u qabow! Ma aanan ogeyn inaad sidoo kale ka timid daabacaad! Waxaan lahaa sooyaal koronto / koronto iyo waxaan ka shaqeeyey dhinaca masaafada ganacsiga xoogaa sidaa darteed waan ogahay meesha aad ka timid. Halkaas ayaan joogay markii aan ka bilawnay caabudaadda iyo otomaatiga ka soo jarista iyo dhajinta bogga dhismayaasha!
Adiga ayaa ah warshad soo jiidasho leh sidoo kale taas oo horudhac u ah tikniyoolajiyadda. Waxaan u maleynayaa in dukaamada tafaariiqda ay yihiin mustaqbalka tafaariiqda, in kasta oo ay maanta xoog badan yihiin, uma maleynayo in "Super Store" ay sii socon doonto toban sano oo kale (ugu yaraan ma rajeynayo).
Qaabka aad dadkiinnu ugu adeegsanaysaan tikniyoolajiyadda Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidnayn waa cajiib. Macaamiishaada ayaa nasiib u leh dadow inay ku helaan!
Qoraal aad u xiiso badan oo la soo dhigay baraha bulshada !. Waxaan ka imid Sun Microsystems, agaasimahayguna sidoo kale wuxuu dhiiri galiyaa falsafadan warbaahinta bulshada. Waxaan wax ka qoray Chris Anderson's Long Tail gudaha
Marka aan siminaaro sameeyo Blogging Corporate iyo Shirkadaha 'si sax ah u sameeya', shirkadda ugu horreysa ee aan xuso waa Sun iyo Jonathon Schwartz!
Waxaan akhriyay bartaada hore! Waxaad qabanaysaa shaqo fiican waxaadna leedahay aragti xiiso leh oo ku saabsan sida tikniyoolajiyaddu isu beddelayso oo nolosheenna u beddelayso.
Agoosto 19, 2007 saacaddu markay ahayd 10:42 PM
Waa kuma ama maxay tahay Shel?
Shel waa Shel Israel, oo ah qoraaga Wadahadal qaawan - buug aan aad ugu boorinayo. Shel wuxuu leeyahay wax weyn blog taasi waxay sii waddaa inay sahamiso oo ay ka hadasho Baraha Bulshada.
Oo isagu waa nin runtii fiican! Wuxuu si aan caadi aheyn u hufan, furan yahay, daacad ah oo laga heli karo boggiisa. Waxaan u maleynayaa inuu ka mid yahay qorayaasha ugu horreeyay ee runtii farsamadiisa ku shaqeeyay isagoo adeegsanaya barta internetka!
28, 2007 at 9: 34 PM
Baraha bulshada waa habka cusub ee soo socda ee xayeysiinta, waxaan aaminsanahay. Waa layaab aniga aniga sida Internetku u soo ifbaxay sanadihii la soo dhaafay waxaanan la yaabanahay waxa iman doona mustaqbalka. Suuqgele kasta oo shabakad ah oo aan isticmaalin baraha bulshada ayaa luminaya fursad weyn oo loogu talagalay ganacsiga kordhay.
Meredith oo ku taal Colorado
Jul 2, 2015 markay ahayd 11:51 AM
Marka waxaad leedahay isdhexgalka macmiilka ayaa ah sababta ugu weyn ee warbaahinta bulshada ay muhiim u tahay? Miyaad u maleyneysaa in boggaga internetka ay leeyihiin fursad isku mid ah ama inay qoraaga ku dejiyeen diyaarad ka sarreysa dhagaystayaasha?
Jul 2, 2015 markay tahay 2:42 PM
Awoodda lagu bixin karo qiimaha laguna dhisi karo awoodda barta '… ka dib la wadaag oo ku dhiirrigeli warbaahinta bulshada waa isku-darka weyn. Warbaahinta bulshada waa mid laba-geesood ah, oo awood kuu siineysa inaad wadahadal la yeelato dhagaystayaasha ama xitaa kuu saamaxaysa inaad dhisto bulshadaada. Ma hubo in midkoodna kan kale ka awood badnaan lahaa.